Sirdoon Jermal ah oo loo xiray hadallo xagjir ah..
Home » WARARKA MAANTA » Sirdoon Jermal ah oo loo xiray hadallo xagjir ah..	Sirdoon Jermal ah oo loo xiray hadallo xagjir ah..
30/11/2016	728 Views Shaqaale ka tirsan hay’adda sirdoonka ee Jermalka ee magaceeda loo soo gaabiyo BfV ayaa la xiray ka dib markii uu faafiyay macluumaad ay hay’addu leedahay isla markaasna uu sheegay hadallo muujinaya xagjirnimo islaamnimo ah sida ay ku warantay warbaahinta Jermalku.
Afhayeen u hadlay hay’adda sirdoonka ayaan xaqiijinin warka uu daabacay wargayska Die Welt ee sheegaya in ninkaasi uu qorshanayay in uu qarxiyo xarunta ugu wayn ee sirdoonka BfV ay ku leeyihiin magaalada Cologne sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters.
Hay’adda sirdoonka ee BfV waxay sheegtay in ninkani uu hadda haysto dhalasho Jermal ah uuna hadda ka hor u dhaqmayay si aan la dareemi karin.
Madaxa hay’adda BfV ayaa wakaaladda wararka u sheegay horaantii November in ay Jermalka ku nool yihiin 40,000 oo xagjir ah kuwaas oo 9,200 oo ka mid ah ay yihiin Salafiyiin.
Previous: Musharaxnimada Madaxweyne Xasan ma dhab baa mise waa dhalanteed?! ‘Qabyo ninkeeda ayaa dhameystira’
Next: Haweeneyda ugu da’da Weyn Dunida oo U Dabaal degeysa 117 Jirsaday..